Read more about အချိန်သက်တန်းအရ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လောက်ကြာအောင်သုံးစွဲသင့်လဲ..?
ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲက လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ အချို့လူတွေဆို ရာသီဥတုလေး အေးလာတာနဲ့ အရိုးတွေတောင် တဆစ်ဆစ် ကိုက်လာတယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေထဲကနေ အဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေနဲ့ ဒီပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
► လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
Read more about ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကာလတွေမှာ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ
Read more about သင့် အသည်းကို ပျက်စီးစေတဲ့ အရာတွေက
အမျိုးသမီးများ မောပန်း နုံချည့်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ
အမျိုးသမီးများ မောပန်း နုံးချည့်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ
အမျိုးသမီးတွေ ခံစားရတဲ့ ထိပ်တန်း ကျန်းမာရေးဝေဒနာ ငါးခုမှာ မောပန်းနုံးချည့်တာက တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက မကြာခဏ မောပန်း နုံးချည့်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) သိုင်းရွိုက် ပြဿနာများ
Read more about အမျိုးသမီးများ မောပန်း နုံချည့်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ
ပိန္နဲသီးစားခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာကောင်းမွန်စေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရများတဲ့ အသီးဖြစ်ပါတယ်။
ပိန္နဲသီးမှာ ကယ်လိုရီ ပါဝင်သော်လည်း ပြည့်ဝဆီ ကိုလက်စထေရာ မပါဝင်ပဲ အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ အသီးဖြစ်တာကြောင့် ပိန္နဲသီးစားခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုငင်ပါတယ်။
*အသေးစိတ်အချက်အလက် သိဖို့အတွက်ပုံလေးကိုထောက်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်*
Read more about ပိန္နဲသီးစားခြင်း၏ အကျိုးများ
ကလေးငယ်များအတွက် သတိထားစရာ ချောင်းဆိုးချွဲကျပ်ရောဂါ
(၁) နှာခေါင်း သိ့ုမဟုတ် လည်ချောင်းထဲက ချွဲသလိပ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
- နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ အသက်ရှူပြွန်ထဲမှာ အမြဲ စိုစွတ်နေအောင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ အရည်အိတ်လေးတွေက သန့်ရှင်းတဲ့ အရည်တစ်မျိုး အမြဲထုတ်ပေးပါတယ်။
- စက်ရုံ၊ ကား၊ ဆေးလိပ်နဲ့ အခြားလောင်စာမှ ထွက်သော မီးခိုးငွေ့များ၊ ဖုန်များ၊ အန္တရာယ်မကြီးသော virus ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးမွှားလေးများနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများက နှာခေါင်းမှ တဆင့် လည်ချောင်းနှင့် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းထဲ ဝင်ရောက်လာသော အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်နေကျ အရည်ကြည်ကို တိုးထုတ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဆေးကြောပေးချင်လို့ပါ။
Read more about ကလေးငယ်များအတွက် သတိထားစရာ ချောင်းဆိုးချွဲကျပ်ရောဂါ
ကျန်းမာလှပသော အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်
(၁) အသီးအရွက်များ စားပါ
(၂) အစိုဓာတ်ထိမ်းခရင်မ် လိမ်းပေးပါ
(၃) နေရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ပါ
(၅) ခန္ဓာကိုယ်မှဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပါ
Read more about ကျန်းမာလှပသော အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်
(၁) သွေးတွင်းမကောင်းသော အဆီဓာတ်များကိုလျော့ချပေးခြင်း
သွေးပြဿနာများ ကြက်ဟင်းခါးသီးအရည်ဟာ သွေး ဆိပ်သင့်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာနဲ့ ယား ယံမှုတွေကို ကုသရာမှာ အလွန်အကျိုး ကျေးဇူးများပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက် ဟင်းခါးသီးအရည်ကို သံပရာရည်နဲ့ ရောကာ အစာမရှိချိန် ဖြည်းဖြည်းချင်း ငုံပြီး နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် ၄-၆လ အကြာမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုကို တွေ့ရပါ တယ်။
(၂) ကင်ဆာဆဲလ်များပွားခြင်းကို လျော့ချတားဆီးပေးခြင်း
ကြက်ဟင်းခါးသီးက ကင်ဆာဆဲလ် ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
Read more about ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး(၅)ချက်
မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်သော အဖြူဆင်းခြင်း
မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြူဆင်းတာက အဖြစ်များတတ်ပြီး မစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်သလို အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြူဆင်းတာက အနံ့အသက် ရှိတယ်၊ အရောင်ရှိတယ် ဆိုရင် ပိုးဝင်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန် အဖြူဆင်းခြင်းမိန်းကလေးတွေမှာ အဖြူဆင်းရတဲ့ အကြောင်းက အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်လတစ်ကြိမ် သားဥကြွေချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အဖြူဆင်းတာက ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သားဥကြွေချိန်နီးတဲ့ ရက်တွေမှာ သင်ရဲ့ အဖြူဆင်းတာက အရည်ကြည်ကြည်တွေ ဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန် အဖြူဆင်းတာဖြစ်လို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
Read more about မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်သော အဖြူဆင်းခြင်း
သင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်က မိသားစုဆရာဝန်
ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို ဆရာဝန်များထံ အခမဲ့မေးမြန်းနိုင်မည့် MyHealthcare မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်း။
"အခုပဲ Download ပြုလုပ်ရယူထားလိုက်ပါ"
Read more about သင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်က မိသားစုဆရာဝန်